रातमा मन्त्रीका छोराहरुको रेष्टुरेण्टमा रमालो – इन्स्पेक्टरलाई ‘चिन्नुभएन कि क्या हो ?’ भनेपछि… – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/रातमा मन्त्रीका छोराहरुको रेष्टुरेण्टमा रमालो – इन्स्पेक्टरलाई ‘चिन्नुभएन कि क्या हो ?’ भनेपछि…
रातमा मन्त्रीका छोराहरुको रेष्टुरेण्टमा रमालो – इन्स्पेक्टरलाई ‘चिन्नुभएन कि क्या हो ?’ भनेपछि…
काठमाडौं । रक्षा र गृह- यिनै मन्त्री र मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमण नसकिए पनि लकडाउनलाई ८० प्रतिशत हलुका बनाएका छन् । तर,कुनै हालतमा नखोल्नु, नगर्नु भनेका काममा यी दुबै ठाउँका छोराहरु मध्यरात सँगसँगै भेटिए । शुरूमा त प्रहरीकै भागाभाग भयो ।
घटना बिहीबार राति १० बजेको हो । लाजिम्पाटस्थित उत्तर ढोकामा रहेको नेपाली सेनाको उपत्यका पृतनाको मुखैमा भिल्ला ७२ नामक रेष्टुरेण्ट छ । त्यसदिन त्यहाँ अत्यधिक मात्रामा गाडी पार्किङ हुँदा ट्राफिक जाम थियो । दरबारमार्ग प्रहरीको भ्यान गस्ती पुग्यो । भ्यान कमाण्डर रहेका सई आफैं भित्र छिरे । तर, भित्र रक्षामन्त्रीका छोरा स्वराज र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) का छोरा प्रतीक थिए । उनीहरूसँगै एकजना विदेशी नागरिक र सेनाका केही अधिकृत पनि थिए ।
प्रहरी त तडकभडकका साथ रेष्टुरेण्ट सञ्चालन भएको देखेपछि त्यहाँ छिरेको थियो । तर, भित्र शक्तिशाली मन्त्रीका छोराहरूलाई देखेपछि पुलिसका भ्यान कमाण्डर निस्किए । उनले दरबारमार्ग प्रहरी बृत्तका फिल्ड कमाण्डर (इन्स्पेक्टर) लाई मोबाइलमा फोन गरे ।
सईले फोन गरेको १२ मीनेटमा इन्स्पेक्टर त्यहाँ पुगे । उनले पुग्नासाथ रेष्टुरेण्टमा जम्मा भएका मनिसहरुलाई लखेट्न थाले । रेष्टुरेण्टकै एकजना स्टाफले लखेटिएका केही युवतीबारे भन्दै थिए, ‘सर, उहाँहरु त भिआइपीको गेष्ट हो ।’
अनि, इन्स्पेक्टरले पुष्टि गर्न खोजे ‘भिआइपी’ भनिएका मन्त्रीका छोराहरू हुन् कि हैनन् ! ती युवाहरू बसेको टेबुलमा तीनवटा व्हिस्कीका पेग भएको ग्लास, आइस क्युबको बट्टा, छेउमा सिगरेट र लाइटर थियो ।
इन्स्पेक्टरले भने, ‘तपाईंहरु किन यहाँ ? गइहाल्नुस् …!’ बादलका छोरा प्रतीकले भने, ‘हाम्रो सल्लाह हुँदैछ । तपाईं आफ्नो काम गर्नुस् ।’ इन्स्पेक्टरले झनक्क झन्किएर भने, ‘मेरो कामै तपाईंहरुलाई यहाँबाट लखेट्ने हो । गइहाल्नुस् यहाँबाट !’
अर्काले भने, ‘चिन्नुभएन कि क्या हो ?’ इन्स्पेक्टरले जवाफ दिए, ‘तपाईंहरुलाई चिन्न जरुरी छैन, देशको नियम-कानुनले नमिल्ने कुरा कसैले गर्न मिल्दैन । खुरुक्क बाटो लाग्नुस्…!’
त्यही पनि छोराहरु उठेनन् । त्यसपछि इन्स्पेक्टरले आफ्नो प्रहरी टोलीलाई कराए, ‘सबैलाई निकाल…छिटोछिटो…!’ प्रहरीले थप मानिसलाई धकेल्दै, तान्दै निकाल्न थाले । यसक्रममा होहल्ला पनि भयो । अनि, दुई भिआइपी बल्ल बसेको ठाउँबाट उठे ।
एकजनाले भन्दै थिए, ‘भोलि त होस्, यसलाई देखाइदिन्छु…!’ प्रहरीले उनको कुरा सुनेको नसुन्यै गरे । प्रहरी टोलीचाहिँ रेष्टुरेण्टको मूल ढोकामा ताला नलागुञ्जेल राती १२ बजेसम्म त्यहीँ बस्यो।-जनआस्थाबाट
भाइले दिदीको मोबाइल च’लाउदा दिदीको यस्तो तस्वीर देखेपछि….